OwaKwaMpumuza uqophe i-music video | News24
OwaKwaMpumuza uqophe i-music video
ISITHOMBE : sithunyelweULandiswa Mthembu owaziwa ngelika ‘T-six’.
UMCULI we-hip hop wasendaweni yaseShayamoya KwaMpumuza uzoqopha i-music video yeculo elisihloko esithi Loluthando asanda kulikhipha ngenyanga kaNtulikazi (July).
ULandiswa Mthembu owaziwa ngo ‘T-six’ uthe uqophe i-music video yakhe ngesonto eledlule e-Westville ngaseThekwini.
Uthe ujabule kakhulu ngalo msebenzi wakhe futhi unethemba lokuthi abalandeli bakhe bazowujabulela uma usufinyelela kubona.
Ekhuluma ne-Echo uMthembu uthe wakhula ewuthanda umculo we-hip hop nokuyikona okwamenza ukuthi agcine esengene endimeni yawo.
“Ngaqala ukubhala izingoma zami ze-hip hop ngisafunda isikoleni ngoba ngangiyithanda. Abantu engisondelene nabo babe sebengitshela ukuthi nginethalente kumele ngiqhubeke. Kusuka lapho ke angibange ngisayeka ngaqala ngaya e-studio ngaqopha izingoma zami ngonyaka wezi- 2010,” kubeka yena.
UMthembu uthe umculo wakhe akusiwona nje owokujabulisa abantu kuphela kodwa uhlose ngawo ukufundisa aphinde aqwashise intsha.
“Ngicula ngezinto eziningi kubakwa izimo zempilo ezinzima esengidlule kuzona noma abantu abasondelene nami nengibaziyo asebedlule kuzona. Lena ngenye indlela yokukhombisa abantu ukuthi ngisho kungathiwa kwenzekani akukho okungadluli uma nje uzimisele uzazi futhi ukuthi ufunani empilweni,” kubeka yena.